सेनाको कुटाइबाट मृत्यु भएका राजकुमारको शव पोस्टमार्टम गर्न काठमाडौं पठाइयो – Naya Kura Daily
July 27, 2020 919
१२ साउन, चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षाका लागि खटिएको सेनाको कुटपिटबाट मृत्यु भएको भनिएका युवक राजकुमार चेपाङको शव पोस्टमार्टमका लागि काठमाडौं पठाइएको छ ।
भरतपुर अस्पतालको शव गृहमा राखिएको उनको शव यहाँ पोस्टमार्टम हुन नसकेपछि काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आइतवार साँझ पठाइएको हो ।
Prevरञ्जन कोइरालालाई कुन कानुनमा टेकेर सजाय छुट दिइयो? कानुन व्यवसायी के भन्छन्?
Nextस्वास्थ्यकर्मीको संसार रुवाउने व्यथा : गर्भवती विदा नपाउँदा दुई जुम्ल्याहा सन्तान गुमाए